Uyenza njani imontage yakho ephezulu yethoba kwi-Instagram ye-Android | I-Androidsis
Sisondela esiphelweni sonyaka, ke kwi-Instagram lixesha lokuqokelela ezona foto ziphumeleleyo ozilayishe kwiprofayile yakho. Ibizwa ngokuba yiTop Nine, apho iifoto ezisithoba ziqaqanjisiwe. Le ndibano iye yaba yenye yezona zidume kakhulu kwisicelo, nangona inyani kukuba asinawo owayo umsebenzi kuwo. Kuya kufuneka sisebenzise izixhobo zomntu wesithathu.
Njengoko isenzeka xa sifuna khuphela iifoto, iividiyo okanye amabali, I-Instagram ayisiniki le nto. Ke ngoko, ukuba ufuna ukwenza eyakho i-Top Nine, kuya kufuneka usebenzise enye iapp. Nokuba ku Kukho enye efumanekayo ye-Android uwenza lo msebenzi ngendlela elula. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo?
Isicelo sokuthi Sifumaneka ngokuba ibizwa ngokuba liThoba leThoba le-Android, ogama lekhonkco lokukhuphela sikushiya ekupheleni kwenqaku. Enkosi ngayo, uya kuba nakho ukwenza le montage ngeefoto ezisithoba zithandwa kakhulu ozilayishe kulo nyaka kwi-Instagram. Insiza kulula ukuyisebenzisa.
Ukusukela ukuba ifakwe, awunakufane unxibelelane neprofayile yakho, ukuba awuyifuni. Kungenxa yokuba sinokubakho ngenisa igama lomsebenzisi lenkangeleko yesimo Kwi-Instagram, ukuba uneakhawunti kawonkewonke. Ngale ndlela, iya kukhangela iakhawunti, jonga ukuba zeziphi iifoto ezithandwa kakhulu kwaye zivelise imontage.
Kwimeko apho uneakhawunti yabucala kwi-Instagram, kuya kufuneka uyenze ngenisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Ke iTop Nine iya kuba nakho ukwenza umsebenzi wayo. Kodwa inkqubo iyafana nakweyiphi na imeko. Emva kwemizuzwana embalwa, le ntaba iya kwenziwa kwisicelo kwaye isilungile.
Uyakwazi ukuyilayisha ukuba uyafuna kwinethiwekhi yoluntu okanye wabelane ngayo ngezinye iindlela ukuba uziva uthanda njalo. Ngele ndlela, eyakho imontage, i-2018 yakho ephezulu yeThoba ivelisiwe sele. Ngokuqinisekileyo kwezi ntsuku ubona iiprofayili ezininzi kwinethiwekhi yentlalo eyenze imontage efanayo neefoto zabo ezaziwa kakhulu.
Ezisithoba ze-Instagram ze-2020 ezigqibeleleyo zeCollage ezisithoba
Umthuthukisi: Ikhithi yoMdali
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyenza njani i-Instagram yakho ephezulu kwi-Android
Ukucaciswa kwe-Oukitel U25 Pro